पूर्णिका शाह प्रेममा परेको खुलासा, को हुन उनको ‘ड्रिम ब्वाइ’ ? — Motivatenews.Com
पूर्णिका शाह प्रेममा परेको खुलासा, को हुन उनको ‘ड्रिम ब्वाइ’ ?
काठमाडौं – पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी नातिनी पूर्णिका शाहले आफू प्रेममा परेको बताएकी छिन । पूर्वयुवराज पारस र युवराज्ञी हिमानीकी जेठी छोरी पूर्णिले एउटा वेवसाइटमा उनका सुभचिन्तकहरुलाई आफू प्रेम सम्बन्धमा भएको बताएकी हुन ।
उनी अहिले अध्ययनका क्रममा थाइल्यान्डमा छिन् । इन्टरनेसनल बिजनेसमा स्नातक अध्ययनरत उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तस्वीर र स्टाटसहरू अपडेट गरिरहन्छिन् ।
पूर्णिकालाई एउटा नमीठो प्रश्न पनि सोधिएको छ । ‘तपाईंका बुबा र हजुरबुबाले वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको हत्या किन गरे ?’ एकजनाले सोधे ।
प्रश्न स् तपाईंको प्रेरणा स्रोत को हो ?
प्रश्न : थाइल्यान्डमा तपाईं कुन कारमा यात्रा गर्नुहुन्छ रु तपाईंसँग कतिवटा कार छन् ?